Hada in kabadan abid, deriskeena iyo xubnaha bulshada waxay ubaahanyihiin marin uhelaan ilaha ay ubaahanyihiin inay ugu adeegsadaan tiknolojiyada nolol maalmeedka. Inteena badan waxaan leenahay internetka guriga, laptop ama kombiyuutar kumbuyuutar ah oo aan annagu leenahay, iyo xirfadaha / kalsoonida aan ugu adeegsan karno qalabkan hawl maalmeedka. Laakiin qiyaastii 20% qoysaska Kansas City ayaa ka maqan mid ama in ka badan oo ka mid ah ilahaas, iyaga oo iska horkeenaya caqabadaha, gaar ahaan sida aan uga shaqeyno meelaha fog, ku dhowaad iskuulkeena carruurteenna, iyo in ka badan.
Maktabadda Dadweynaha ee Magaalada Kansas waxay sii waddaa inay horseeddo xalal cusub oo lagu xallinayo kala-qaybinta dijitaalka ah ee KC iyo adeeggeeda cusub ee TechConnect Hotline . Qof kasta oo ka mid ah metrooga weyn ee KC, labada dhinac ee Stateline, wuxuu wici karaa ama qoraal u diri karaa lambarkayaga si uu u waydiiyo su'aal KASTA oo la xiriirta helitaanka ilaha la awoodi karo (mararka qaarkood BILAASH!) Waxay u baahan yihiin in lagu daro lambar ahaan.
Saxiix fadhiga jiheynta / macluumaadka si aad wax badan uga barato oo aad u go'aansato inay tani kugu habboon tahay adiga.
Markaad ka jawaabeyso wicitaanada ama qoraalada adoo adeegsanaya barnaamijkeena xarunta wicitaanka ee shabakada (lama soo degsan karo ama adeega taleefanka looma baahna!), Si fudud uga soo qaado wicitaankaaga macluumaad aasaasi ah oo ku qor keydkeena keydka.
Waxaan haynaa dhammaan qalabka, tababarka, iyo taageerada kaa caawinaysa inaad kaa caawiso inuu go'do 20%! Dhis jadwalkaaga oo iskaa wax u qabso uga qabso guriga, ama meel kasta oo aad ku haysato kombiyuutar iyo internet.